व्यवसायिक बेल खेति गर्ने हो कि ? स्वास्थ्यमा पनि यस्ता छन् फाइदाहरु - ज्ञानविज्ञान
बेल (Wood Apple, Limonia acidissima) नेपालमा परापुर्व कालदेखि नै खाँदै आएको एक फल हो ।
बेललाई सस्कृतमा श्री फल भनिन्छ । यो ६-१० मि. सम्म अग्लो हुने अर्ध-पतझर रुख हो । यसका पातहरूमा एउटै पत्र डाँठमा तीनवटा पातहरू छुट्टिएका हुन्छन् र यसा लाई बेलपत्र भनिन्छ । तीनवटा पातमध्ये बीचको पात केही ठूलो हुन्छ । पातका साइज ५-१० से. मी. लामा र २.५-६.३ से. मी. सम्म चौडाई भएका र अण्डाकार र टुप्पो चुच्चो परेको हुन्छ। यसका आँख्ला नजीकै सोझा काँडाहरू हुन्छन् । फूलहरू हरिया-सेता रंगका र बास्नादार हुन्छन् ।
नेपालको पुर्वी क्षेत्रको धरान, धनकुटा सडक खण्डको सुख्खा क्षेत्रमा जंगलमा बेलका रुखहरु प्रशस्त पाईन्छन् । यदाकदा गाउँघरतिर पनि बेलका रुखहरु प्रशस्त देख्न सकिन्छ तर व्यवसायिकरुपमा नै बेलको खेति नेपालमा गरिने गरिएको भने छैन ।
थाईल्याड, मलेसिया, कम्बोडिया आदि देशहरुमा बेलको व्यवसायिक खेति भएको हुन्छ । बेलको व्यवसायिक खेतिबाट ति देशले निकै राम्रो आर्थिक उपार्जन गरेका हुन्छन् ।
नेपालमा पनि बेल खेतिको प्रशस्त सम्भावना रहेको देखिन्छ । जलवायु परिवर्तनले गर्दा नेपालमा हुने परम्परागत बालीनालीको उब्जनीमा नकारात्मक असर देखिन थालेको छ । यस्तो अवस्थामा आर्थिक उपार्जनका लागि कृषकहरुले नयाँ नयाँ विकल्प छान्नु पर्ने चुनौति थपिदै गएको देखिन्छ । यस्तोमा नेपालको भुबनोट र समयका आधारमा बेलको खेति उपयुक्त देखिन्छ ।
नेपालको पहाडी भेगको सुख्खा हुने भुभागहरुमा बेलको व्यवसायिक खेति गर्न सकिन्छ । बेलको व्यवसायिक खेति नेपाली कृषकहरुको लागि आम्दानीको नयाँ राम्रो स्रोतका रुपमा हुन सक्छ ।
बेलको फूलहरूको व्यास करीब ३ से. मी. सम्म हुन्छन् । फल गोलाकार करिब १५ से.मी सम्म व्यास भएका र बाहिरी आवरण एकदम कडा हुन्छ । फल भित्र ८-१५ वटा कोठाहरू हुन्छन् जसमा वीउ र सुन्तला रंगको गुदी भरिएको हुन्छ । यसको प्रयोग हुने भाग फल, जरा र पातहरू नै हुन् ।
यसका कारण बेलको फलमात्र होइन, जरा र पातहरु पनि उपयोगी हुन्छन् । बेलका उत्पादनहरु स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक भएका कारण यसको माग पनि निकै राम्रो हुन्छ । बेलबाट सामान्यतया हुने फाइदाहरु यस्ता छन् :
१) यो शक्ति भण्डारण भएको फल हो ।
२) आन्तरिक शारिरक क्षमताको विकास गदर्छ ।
३) पाचन प्रणालीको राम्रो विकाश गरी खाना अपच हुने समस्याबाट बच्न सकिन्छ ।
४) ग्यास्ट्रक अल्सर निको पार्छ ।
५) शरिरमा भएका विषाक्त पदाथर्हरु लाई हटाउने काम गदर्छ ।
६) शरिरको आन्तरिक प्रतिक्रियाको लागि शक्ति प्रदान गर्दछ ।
७) गर्भवती महिलाहरुको लागि अति उपयोगी मानिन्छ ।
८) सुगर रोग नियन्त्रण गदर्छ ।
९) कलेजो स्वस्थ राख्न सहयोग गर्छ ।
१०) पायल्स रोगबाट बचाउछ ।
११) छाला तथा कपालको स्वास्थ्यको लागि अति लाभदायक मानिन्छ ।
१२) रक्तचाप लाई सन्तुलन गदर्छ ।
१३) यसको पातको प्रयोगले हातगोडाका जोर्नी दुख्ने, सुनिएको र जन्डिष रोग समेत निको पार्दछ ।
१४) यसको फल जुस प्रति लिटर रू ४२० सम्ममा बिक्री भएको पाईन्छ र एक के. जी. फलबाट १.५ लि जुस निकाल्न सकिन्छ ।
लेखक: सरोज राई (प्रा.स.,बाली संरक्षण नेपाल कृषि सेवा)
बेलसँग सम्बन्धित तलको लेख भने हामीले विभिन्न अनलाइनहरुबाट साभार तथा सम्पादन गरेका हौँ ।
मधुमेह अर्थात सुगर रोगमा बेलको उपयोगिता
Don't Miss it बच्चालाई भातको माड खुवाउँदा अनेकौ फाइदा
Up Next उमेर नपुगी बृद्ध बनाउने केहि आदत